ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: အရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်း ပရိဗ္ဗိုလ်သည် အရှင် အဿဇိ၏ တည်ငြိမ်ပုံကိုကြည့်နေပုံ
အရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်း ပရိဗ္ဗိုလ်သည် အရှင် အဿဇိ၏ တည်ငြိမ်ပုံကိုကြည့်နေပုံ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်တို့တွင်အသာဆုံးဖြစ်၍ အဂ္ဂသာဝကာဟု ထင်ရှားသော အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်တို့သည် ဘုရားအထံမရောက်မီတရားထူးကို စုံစမ်းကာ သဉ္စည်း ဆရာကြီးထံမှာ ပရိဗ္ဗိုဇ်လုပ်၍ နေကြ၏. . အခါတစ်ပါး၌ အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် အရှင်အဿဇိ ကိုမြင်၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာ တရားထူးရှိမည် ဟု အထင်ရှိသဖြင့် နောက်မှ လိုက်သွားလေသည်. .
အရှင်အဿဇိ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီး၍ "အရှင်တို့ဆရာသည် အဘယ်တရားမျိုးကို ဟောပါသနည်း " ဟုမေးလေသည်. . "ငါတို့ဆရာသည် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခချုပ်ရာနှင့် ထိုချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းလမ်းများကို ဟောတော်မူ၏" ဟုဖြေတော်မူရာ သောတာပန်ဖြစ်လေသည်. . . ထိုအကြောင်းကို အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ပြောပြ၍ သောတာပန် ဖြစ်ပြန်ရာ တပည့်များနှင့်အတူ ဘုရားထံ ပြောင်း၍ ရဟန်းပြုကြလေသည်. . .
Sariputta Moggallana were the two most distinguished of the Buddha's disciples and were well-known as his two chief disciples. Before they met the Blessed One they were leading the religious life under Sanjaya as wandering ascetics in search of truth . One day Sariputta saw the Venerable Assaji going round Rajagaha early in the morning for alms, with decorous walk and perfect deportment. He though , " Surely this is one of the monks who are arahants, or who have entered on the path of arahantship", and followed in the wake of this monk.
When the Venerable Assaji had taken his meal, Sariputta drew near spoke to him as follows:- "Who, brother, is your teacher and whose doctrine do you approve?" The Venerable Assaji replied, " The Blessed One,agreat Sakayaputta monk, is my teacher. The Doctrine proclaimed by the Blessed One I approve. It shows suffering , cause of suffering, cessatino of suffering and the path leading to the cessation of suffering. " On hearing this exposition of the Doctrine, Sariputta was established in the first holy stage of the Ariyan Path, Then Sariputta went to tell his friend the good news and Moggallana was also established in the first holy stage of the Ariyan Path. Both of them withalarge following of their disciples became monks under the Doctrine and Discipline of the Buddha.
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, August 09, 2011
mstint August 9, 2011 at 7:39 PM
ပါရမီရင့်ကျက်သူများကျတော့ တရားထူးတရားမြတ်ရပြီး သောတာပန်ဖြစ်မြန်တယ်နော်။
သည်မြေ သည်ပန်း မျှော်တိုင်းလွမ်းသည်
အရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်း ပရိဗ္ဗိုလ်သည် အရှင် အဿဇိ၏ တည...